Na ny trondro maty mitsingevana | Martech Zone
Na dia mitsingevana trondro maty aza
Alahady, Novambra 22, 2009 Alakamisy Oktobra Oktobra 4, 2012 Matt Nettleton
Rehefa nihalehibe aho dia notezain'ny optimista sy pessimist iray, ny reniko angamba no olona nahafinaritra indrindra nahafinaritra ahy indrindra afaka nifanena taminao. Nataony izay hahazoana antoka fa notezaina tamin'ny toe-tsaina be dia be aho, tsy naniry na inona na inona afa-tsy ny tsara ho an'ny rehetra ary manao izay fara heriko mba hanampiana ny olona hivoaka. Rehefa nanomboka nianatra sy matotra aho dia nanontany azy ny antony manampy ny olona sasany izay tena tsy tiany ary tsotra ny valinteniny.
Matt rehetra mety ho tsara kokoa ary manampy azy ireo hanampy ny fiaraha-monina. Tsarovy fa "ny fiakaran'ny rano dia mampiakatra ny sambo rehetra". Tsy fantatro fa ny hafany dia ilay hafatra lehibe horaisiko amin'ny fianarana toekarena taty aoriana rehefa nanatrika ny oniversite aho. Nianarako indray fa raha ny toekarena no resahina, rehefa tsara ny raharaha dia "mampiakatra ny sambo rehetra ny onja misandratra."
Ny taonan'ny fisondrotan'ireo taona 90 dia nanaporofo tokoa ny reniko sy ireo mpampianatra momba ny econ dia samy manam-pahaizana. Nandritra ny 15 taona mahery (hatramin'ny 2008) ny fiakaran'ny vidim-piainana dia nampisondrotra ny sambon'ny tsirairay. Ho an'ny ankamaroan'ny orinasa madinidinika dia tsara izany taona izany, be ny mpividy, mahazo aina ny tombom-barotra ary amin'ny ezaka kely dia tsotra ny mivoaka ary mahita vinavina vonona sy vonona hampitombo ny fidiram-bolanao.
Tamin'ny 2008, nanomboka nisy dikany ny antsasaky ny hafatry ny ray aman-dreniko. Lehilahy lehibe i Dada fa tsy toa an'i Neny fa nahay nitazona ny sainy hifantoka amin'ny lafin'ny zava-nisy marina izy. Hafa kely ny hafany tamiko. Nilaza tamiko izy Na ny trondro maty aza mitsingevana. Ny tiany holazaina dia rehefa miakatra ny onja dia mihetsika ny zavatra rehetra fa tsy sambo daholo akory. Tsotra tokoa ny heviny, ny toekarena ratsy dia tsy miteraka fahalemena, mampiharihary fahalemena ny toekarena ratsy.
Nandritra izay taona vitsy lasa izay dia mianatra miaina amin'ny hafatry ny dadanay aho. Ary amin'ny WE, ny toekarena amerikanina no tiako holazaina. Nahita orinasa marobe nandray fanapahan-kevitra ratsy izahay. Ary rehefa mora ny fotoana dia toa tsara ireo fanapahan-kevitra ireo, tsy nisy ny tena olana na ny vokadratsin'ny safidy ratsy. Saingy raha vantany vao nifantsitsitra teo amoron-dàlana izahay dia naseho ireo vokany ary matetika loatra dia nanjary tsy fahombiazana ny loza.
Amin'ny maha mpanazatra varotra ahy dia mandany ny androko hiara-miasa amin'ireo tompona orinasa aho izay mahita lafiny vaovao amin'ny asany. Ireo mpivarotra izay noheverin'izy ireo fa tsara dia nivadika ho tsy nanao afa-tsy ny nitaingenan'ny mpanjifa manan-danja vitsivitsy izay nitombo. Ireo mpivarotra izay vonona ny hampihena kely ny vidiny amin'ny fotoana mahaliana dia maty ankehitriny satria tsy manana na inona na inona miverina afa-tsy ny fanapahana ny vidiny.
Ireo mpivarotra izay tsy niandrandra fanantenana tsy tapaka dia nijery ny firodanan'ny volany tamin'ny fivarotan'ny mpifaninana ny kaontiny. Roa taona lasa izay dia mety tsy nisaina ireo fahalemena ireo, matanjaka ny toekarena, be ny mpividy ary salama ny sisiny. Nihalehibe ny toekarena ary ny fizotry ny varotra malemy ary ny ekipa mpivarotra diso dia olana, saingy tsy dia nisy olana ampy namboarina.
Hafa ny androany, takalon'aina ny orinasanao. Ny ekipan'ny varotrao dia mifehy ny ho avinao ary raha tsy fantatrao fa miasa avy amin'ny paikady mety izy ireo, amin'ny rafitra marina ary manana ny fahaiza-manao marina na dia ny fanamby aza dia ho fanamby.
Tags: marketing amin'ny Bluetooth
Famantarana marim-pototra: West Baden
Manamarina ireo fanovozan-kevitra momba ny varotra an-tserasera
22 Novambra 2009 à 2:53
Tiavo ilay fitenenana. Havana akaiky amin'ny hoe "Na ny famantaranandro tapaka aza dia mety indroa isan'andro?"